Vaovao - MOMBA NY FITONDRANA FITIAVANA FITIAVANA
Miaraka amin'ny iraka hampivoarana ara-teknika ary manavao hatrany ny famoronana vokatra vaovao, ary ny fihevitr'ilay "kalitao voalohany, ny tahan'ny vidiny avo lenta, ny fandefasana haingana" fitsipika fitantanana, Izahay, KONA, dia mirehareha amin'ny farango manjono manidina tsara kalitao.
Inona no ananantsika farango manjono?
Ny safidinay fanidina manidina dia manasongadina farango ho an'ny lalitra maina, nymph, poppers, streamers, jigs ary fanjonoana lalao lehibe, izay samy barbed na barbless. Izy rehetra dia vita amin'ny vy avo lenta avo lenta ary manana teboka maranitra simika.
Arakaraka ny maha-lehibe azy, ny kely kokoa ny hook.
Ny tabilao etsy ambany dia mahitsy ary manome anao fampahalalana marobe.
Raha hamatotra lalitra lena ianao (streamer, emerger, nymph) dia misy lanjany telo lehibe azo isafidianana: mavesatra, lanjany antonony ary maivana. Miaraka amin'ireo dia mila misafidy endrika mety ianao. Azo inoana fa boribory boribory na sproat.
Tady Barb & Barbless
Ny jono dia fanatanjahan-tena tsara, tsy manjono amin'ny trondro fotsiny isika, fa amin'ny fialamboly. Raha tsy manao izany isika dia mety hiatrika ny toe-javatra tsy misy trondro hazandrano amin'ny ho avy.
Ny hook barbless dia tsy ho toy ny manapotika ny vavany ary mora kokoa ho azy ireo ny miaina.
Ankoatr'izay, azafady, alao antoka ny fiambenana ny fitsipika eo an-toerana rehefa misafidy ny farango ianao. Ny rano arovana kokoa dia mila farango barbless.
Ho an'ny matauza manjono, afaka manao OEM sy ODM izahay ary ny fonosana dia azo totofana arak'izay takinao. Ireto ny fonosana fametahana ho an'ny referansao.